Danjire Micheal Keating oo digniin kulul u diray Puntland iyo Galmudug. – Radio Daljir
Danjire Micheal Keating oo digniin kulul u diray Puntland iyo Galmudug.
Noofember 14, 2016 6:31 b 0
Wakiilka Gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya danjire Micheal Keating ayaa ugu baaqaylabada dhinac ee Puntland & Galmudug in ay si deg deg ah ku hirgalayaan qodobada heshiiska.
“Si shaqsiyan ah Cabdi wali Maxamed Cali Gaas Madaxweynaha maamulka Puntland iyo Cabdi kariin Xuseen Guuleed Madaxweynaha maamulka Galmudug waxa ay balan qaadeen in ay adkeyn doonaan heshiiska , laakiin waxaa muhiin ah in midaas laga wada dhabeeyo ” ayuu yiri Danjire Keating.
Danjire Mcheal Keating ayaa uga digay Puntland iyo Galmudug in ay hareermaraan heshiiskii lagu gaaray Gaalkacyo ee uu goobjooga ka ahaa Ra’iisulwasaaraha DFS Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake.
DHEGEYSO-Siyaasi Cabdidaahir M Yuusuf Yey oo kahadlay heshiiskii Galkacyo.
DEG DEG-Dowladda Puntland oo gaashaanka u daruurtay war kasoo baxay Jawaari.